UMasipala waseThekwini nabe-Water Research Commission nesivumelwano sokusebenzisana – Sivubela intuthuko Newspaper
UMasipala waseThekwini nabe-Water Research Commission nesivumelwano sokusebenzisana
UMNU Ednick Msweli oyisikhulu sezamanzi nokuthuthwa kwendle kuMasipala waseThekwini.
INTENDELE iwele esandleni emphakathini owakhele uMkhandlu waseThekwini njengoba lo mkhandlu ophikweni lwezamanzi nokuthuthwa kwendle ngokubambisana nabe-Water Research Commission (WRC) besayine isivumelwano sokusebenzisana ekuqinisekiseni ukuthi bonke abantu baseThekwini bathola amanzi ahlanzekile.
Lesi sivumelwno kuhloswe ngaso ukuqinisekisa ukuthi yonke iminxa ebhekelele ukuthuthukiswa kwengqalasizinda ikakhulukazi ohlelweni lwamanzi nokuthuthwa kwendle kuhanjiswa ngohlelo lobuchwepheshe besimanje.
Okuzobhekwa kakhulu ngalesi sivumelwano ngukuqikelela ukuthi lezi zingqinamba eziye zinqinde uhlelo lokuthuthwa kwendle emalokishini, emadolobheni kuze kufike nasezindaweni zasemakhaya ziyanqandwa. Ukukhula kwesibalo sabantu kuphoqa ukuthi kuqikelelwe ekuhanjisweni kwamanzi okuphuza anempilo kanjalo nokuthuthwa kwendle kuhambisane nohlelo lokuhanjiswa kwentuthuko yomphakathi.
UMnu Ednick Msweli oyisikhulu esikhulu ophikweni lwezamanzi nokuthuthwa kwendle kuMasipala waseThekwini uthe lolu hlelo abeza nalo lusho lukhulu ekusizeni lomkhandlu onesibalo esiphezulu sabantu abadinga ukunakekelwa nsuku zonke ngentuthuko. “Lokhu kubambisana kwethu kuzogcizelela uhlelo oluhle lwabe-WRC okungolokuthuthukisa ingqalasizinda eyaziwa ngele-Water Technologies Demonstration Programme and the South African Sanitation Technology Enterprise Programme,” usho kanje.
UMnu Msweli wengeze ngokuveza ezinye izinto eziye zithikameze ukuhanjiswa kwamanzi kubantu kuhlanganisa ukushoda kwawo, ukunukubezeka kwawo nokuguquka kwesimo sezulu athe kuye kube yinkinga ababhekana nayo benguMkhandlu waseThekwini. “Lokhu kuhlangana kwethu kuzosiza zonke izinhlaka ukuhlonza konke okuyizingqinamba ezibhekana neTheku okuzosiza ekutheni kuyiwe kahle phambili ngokubambisana,” ubeke kanje.
I-Chief Executive Officer yase-WRC uDhesigen Naidoo uthe bakholwa ukuthi lesi sivumelwano sokusebenzisana nabaseThekwini kwezobuchwepheshe nezenhlalo kuzoholela ekutheni iNingizimu Africa iye phambili ngokuba nohlelo oluzinzile lokuqinisekisa ukuhanjiswa kwentuthuko kubantu ngendlela yesimanje. “Kuyajabulisa ukubambisana nokwabelana ngemibono yokubhekelela ukwethula kwenhlanzeko yamanzi nokuthuthwa kwendle lokho okuzokhuphula inhlalakahle ezozuzisa abantu baseNingizimu Afrika,” uphethe kanje.